Ọkachamara Semalt: Eke Ọgba na Mara Mma. Ejiri Ala Nwepu
Mgbe ị na-eme nchịkọta data ma ọ bụ ọrụ mmụta igwe, ị nwere ike ịchọta ebe nrụọrụ weebụ iji nweta data dị mkpa ma mezue ọrụ gị. Asụsụ mmemme Eke Ọgba nwere ngwa nchịkọta dị ike nke nwere ike iji maka nzube a. Dị ka ọmụmaatụ, ịnwere ike iji njikwa mara mmaShine maka HTML.
N'ebe a, anyị ga-ele anya na BeautifulSoup ma chọpụta ihe kpatara eji eme ihe ugbu a nchịkọta weebụ .
- Ọ na-enye ụzọ dị iche iche maka mfe igodo, ịchọgharị na imezi osisi parse nke mere ka ị nwee ike ịkọwapụta akwụkwọ ma wepụ ihe niile ị chọrọ n'ejighị ederede.
- Ọ na-agbanwegharị akwụkwọ ndị na-apụ apụ na UTF-8 na akwụkwọ abata na Unicode. Nke a pụtara na ị gaghị echegbu onwe gị banyere ederede nyere na akwụkwọ ahụ akọwapụtara ihe dị na nzuzo ma ọ bụ Mma Obere nwere ike idozi ya.
- BeautifulSoup na-ewere elu karịa ndị ọzọ na-ewu ewu Eke Ọgba parsers dị ka html5lib na lxml. Ọ na-enye ohere ịnweta usoro dị iche iche. Otú ọ dị, otu mmezigharị nke usoro a, bụ na ọ na-eme ka mgbanwe dịkwuo oke na-efu.
Kedu ihe ị ga-eji wepu weebụsaịtị na BeautifulSoup?
Iji malite ịrụ ọrụ na BeautifulSoup, ịkwesịrị ịmepụta usoro mmemme Eke Ọgba (ma ọ bụ mpaghara ma ọ̄ bụ ihe nkesa) setịpụrụ na igwe gị. A na-ebukwasị Eke Ọde na OS X, ma ọ bụrụ na ị na-eji Windows, ị ga-achọ ibudata ma wụnye asụsụ site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị.
Ikwesịrị ịmebe Nhọrọ BeautifulSoup na ntinye arịrịọ.
N'ikpeazụ, ịdị na-arụ ọrụ na mkpado HTML na ọdịdị dị mma ma ọ bụrụ na ị ga-arụ ọrụ na data weebụ.
Ịbubata arịrịọ na BeautifulSoup ụlọ akwụkwọ
Site n'usoro mmemme Egwuregwu na-edozi nke ọma, ị nwere ike ịmepụta faịlụ ọhụrụ (iji nụ, dịka ọmụmaatụ) na aha ọ bụla ịchọrọ.
Ụlọ akwụkwọ arịrịọ a na-enyere gị aka iji ụdị HTTP dị na mmadụ n'ime ihe omume Python gị ma ọ bụrụ na BeautifulSoup na-eme ka nkwụsị ahụ mee ngwa ngwa. Ị nwere ike iji nkwupụta mbubata iji nweta maakwụkwọ.
Otu esi anakọta ma kpochapụ ibe weebụ
Jiri arịrịọ. nweta
usoro iji nakọta URL nke ibe weebụ nke ịchọrọ wepụ data. Ọzọ, mepụta ihe mara MmaSoup ma ọ bụ osisi parse. Ihe a na-ewe akwụkwọ ahụ site na arịrịọ dị ka arụmụka ya wee kpochapụ ya. Na ibe a na-anakọtara, parsed ma setịpụ dịka ihe mara MmaSoup, ị nwere ike ịga n'ihu ịnakọta data ị chọrọ.
Wepụ ihe edere ederede achọrọ site na ibe weebụ
Mgbe ọ bụla ịchọrọ ịchọta data weebụ, ị ga-achọ ịma otú Ihe Nlereanya Ihe Nlereanya (DOM) nke kọntaktị ahụ kọwara.Na ihe nchọgharị weebụ gị, pịa aka nri (ma ọ bụrụ na iji Windows), ma ọ bụ CTRL + pịa (ma ọ bụrụ na iji MacOS) na otu n'ime ihe ndị na-etinye akụkụ nke data mmasị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịtọpụ data gbasara mba ụmụ akwụkwọ, pịa otu n'ime aha nwa akwụkwọ. Nchịkọta nhọrọ na-agbapụta, na n'ime ya, ị ga-ahụ ihe nchịkọta nhọrọ yiri Inspect Element (maka Firefox) ma ọ bụ Lelee (maka Chrome). Pịa ihe nlere anya menu, na ndị na-arụ ọrụ weebụ ga-apụta n'ime ihe nchọgharị gị.
BeautifulSoup bụ ngwa ngwa dị ike ma dị ike HTML na-enye gị ohere dị ukwuu nke mgbanwe mgbe scraping nrụọrụ weebụ . Mgbe ị na-eji ya, echefukwala idebe iwu nchịkọta izugbe dịka ịlele Usoro na Ọnọdụ Weebụ; nyochaa saịtị ahụ mgbe niile ma na-emelite koodu gị dịka ọ bụ mgbanwe ndị e mere na saịtị ahụ. N'inwe ihe omuma a banyere ntanetiti na Python na BeautifulSoup, i nwere ike inweta ngwa data weebụ gi maka oru gi Source .